août 2017 - Page 2 sur 51 -
Fenoarivo Atsinanana : Voakarakara tanteraka ireo tantsaha
28/08/2017 admintriatra 0
Fotodrafitrasa efatra mihantona no notokanan’ny minisitra eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompana Rivo Rakotovao ny sabotsy lasa teo tao amin’ny renivohitry ny faritra Analanjirofo, izany hoe tao Fenerivo Atsinanana. Anisany …Tohiny
Fanafihana « bar » teny Ampitatafika : Lehilahy maty voatifitry ny jiolahy nitondra kalaky sy PA
Lehilahy iray indray no namoy ny ainy vokatry ny asan-jiolahy niseho teny amin’ny « bar » iray teny Tangaina Ampitatafika, tamin’ny sabotsy lasa teo, tokony ho tamin’ny 07 ora hariva. Nisotrosotro tao amin’io toerana io, ity niharan-doza …Tohiny
Fanatanjahantena an-tsekoly : Samy nanao izay ahazoany medaly ny mpifaninana
Nifarana omaly ny fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly, izay nokarakarain’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Araka ny efa fantatra moa dia tany Mahajanga no nanatontosana izany, ary mpianatra an-tsekoly marobe avy any amin’ny faritra 22 no nandray anjara nandritra ny …Tohiny
Fanafihana OTIV tany Anjeva : Nidoboka am-ponja ilay lehilahy nanambana basy
Naiditra am-ponja vonjimaika avy hatrany, taorian’ny nanolorana azy teo anatrehan’ny fampanoavana, ny lehilahy iray tompon’antoka tamin’ny fanafihana sy fikasana handroba OTIV iray tany Anjeva, ny 24 aogositra lasa teo. Nadoboka an-tranomaizina niaraka taminy ihany koa …Tohiny
Ho fanamafisana ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, nisy ny fampitaovana ny tafika malagasy. Tontosa, omaly mantsy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN) sy ny masoivohon’i Chine tamin’ny fifanarahana tamin’ny fampitaovana an’i Madagasikara ara-tafika. Tamin’izany ...Tohiny
Sahotaka tamin’ny fifidianana : Minia mikimpy ny praiminisitra
Carlton Anosy : Nampahafantarina ny lalàna mifehy ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana